သာလွန်ဇောင်းထက်| January 19, 2013 | Hits:4,127
| | သမ္မတဦးသိန်းစိန်၊ ဒုတိယသသမ္မတဒေါက်တာစိုင်းမောက်ခမ်းတို့နှင့်အတူ ပထမအကြိမ်မြန်မာနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဖိုရမ် အစည်းအဝေးဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားတက်ရောက်လာသော နိုင်ငံခြားကိုယ်စားလှယ်များအမှတ်တရ ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးကြစဉ်။(ဓာတ်ပုံသာလွန်ဇောင်းထက်/ဧရာဝတီ)
Salai Lian January 19, 2013 - 1:57 pm Is Thein Sein still talking about peace talk? Why not political dialogue?
Reply daurebornsumlut January 19, 2013 - 7:24 pm yes,, it true!! Peace talk is Political Treat!!!
Reply phoe thar lay January 19, 2013 - 2:37 pm kio က ၁၉ .၁.၂၀၁၃ နံနက်၁၁.၀၀နာရီခန့်တွင်ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီသမားများလိုက်ပါလာသောhilux ကားအားလက်ပြစ်ဘုန်းများဖြင့်တိုက်ခိုက်ကြောင်းလွယ်ကျယ်ဗန်းမော်လမ်၂၈မိုင်တွင်
Reply phoe thar lay January 19, 2013 - 2:55 pm yangon့နေပြည်တော်တခြားနိုင်ငံတွေကနေပြီတော့စစ်ပွဲရပ်တို့ဘာတိုအော်မနေပ်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်ကိုလဲလာကြည့်ကြပါအုန်းဘာစီးပွာရေးမှလဲလုပ်လိုမရတော့ဘူးkio kia ကရှိသမျှနယ်စပ်အပေါက်တွေကိုလိုက်ဖျက်ဆီးနေတယ် သူတို့မိန်းမနဲ့ကလေးတွေကိုကြတော့ဒုခသယ်စခန်းပို့ထားတယ် ကိုမင်းကိုနိုင်ကိုလဲပြောပေးပါအုန်းလိုက်ဇာတခုထဲမကြည့်နဲ့လို့လိုက်ဇာက kia စခန်း
Reply phoe thar lay January 19, 2013 - 3:08 pm kioကဦးလနန်ပြည်သူတွေထိကုန်ပြည်ဘာပြေမလဲ
Reply AunG January 22, 2013 - 8:48 am First, all burmese army must retreat from their position at Front Line. Second , all burmese army must getout from Kachin Land and then, Automaticaly Peace become in Kachin Land . Third , KIO and Burma generals/leaders must meeting at Third Country and need invite to International Deligates. So, Burma generals and leaders cannot Lies again, then, they easily can discuss Political dialouge.
Reply ကချင်ပြည်သားတစ်ဦး January 19, 2013 - 3:33 pm အစိုးရဘက်ကတော့ရပ်နေပြီ၊ဒီနေ့(၁၉)ရက်မှာပဲ ကေအိုင်အေဘက်ကထောင်ထားတဲ့ မိုင်းကြောင့် ဗန်းမော်-မိုးမောက်-လွယ်ဂျယ်ကားလမ်းတွင် ဟိုင်းလန်(၁)စီး၊ဘင်(၂)စီး မိုင်းထိပြီး လူ(၁၂)ဦးခန့် ဒဏ်ရရနေပါတယ်၊တဘက်က ရပ်တော့ နောက်တစ်ဘက်ကတိုက်နေရင် မကောင်းဘူး၊လက်ခုတ်ဆိုတာ(၂)ဖက်တီးမှ မြည်တာ၊ကေအိုင်အေဘက်ကလည်း ၇ပ်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်
Reply ThuyaLada January 19, 2013 - 3:51 pm You shouldn’t invited them and stopped war.They never trust you(burmese).You can not trust them too.They never gonna stop this war even you stopped.You shouldn’t gave them one more hance.You should respect your own soldiers ,lost in this war.Why they gave their lives,for what?Forahill?Anyway,I am from army and really hate this war game.I amasoldier.Can not say sweet words.I will leave from army as soon as i haveachance.Not do or die anymore for any reason.
Reply han han January 19, 2013 - 3:55 pm U Thein sein LONG LIFE
Reply daureborn January 19, 2013 - 7:21 pm Thein Sein talking about Peace talk, it isaPolitical Treat on Kachin!!!
Reply pnwara January 20, 2013 - 6:33 pm ရိုးသားဘို့ တော့လိုတယ်နော်- မီဒီယာမှာ လူကြားကောင်းယုံလေးပြောတာတော့ လူတိုင်းပြောတတ်တယ်။ ယခင်က သမတကြီးက စစ်ဆင်ရေးလုပ်နေတဲ့ ကိစ္စရပ်ဆိုင်းထားဘို့အမိန့် ပေးထားတာကို တပ်မတော်က မလိုက်နာဘဲ လေယာဉ်တွေနဲ.တောင် စစ်ပွဲတွေ ဆင်နွှဲလိုက်သေးတယ်။ အခုတခါ ထပ်ပြီးညွှန်ကြားတယ်ဆိုတော့ အရင်တခါ ညွှန်ကြားတာကို တပ်မတော်က မလိုက်နာဘူးဆိုတဲ့သဘောသက်ရောက်နေတယ်။ ဆိုစေ-မြဲစေတဲ့–
Reply YeAg January 21, 2013 - 4:24 pm အရင်က အဖြစ်တွေကို ခဏ ဘေးဖယ်ထားပြီး လက်ရှိအခြေအနေကို လက်တွေ.လုပ်ကြည့်တာ ခေတ်နဲ.ညီမယ်လို.ယူဆမိပါတယ်။ တကယ့်နိုင်ငံရေးသမား /ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေ ကတော့ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် ရှိခြင်း ဆိုတာကို ရှက်စရာ လို.မယူဆတတ်ကြပါဘူး။ KIA ခေါင်းဆောင်တွေက ရှက်စရာလို.ထင်ပြီး ပြောင်းလဲမပေးသေးတာက အဖြေလို.ထင်ပါတယ်။ အစိုးရပြောတဲ့အတိုင်း တဆင့်ပဲ လိုက်လျောပေးပြီး တကယ်ပဲ တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံပါတဲ့ညီလာခံ မလုပ်ပေးဘူးဆိုမှ လက်ရှိစွဲကိုင်ထားတဲ့မူကို ဆက်လုပ်ပေါ့။ ဒါဆို ကမ္ဘာ ကလဲ ထောက်ခံမှာပဲ၊တိုင်းရင်းသားအားလုံးတင် မကဘူး နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေ အားလုံး ပါလာလိမ့်မယ်။ပြည်သူတွေလဲ အသက်ရှူချောင်မယ်၊(လူသစ်တောင် ပိုပြီးစုဖို.အချိန်ရသေးတယ်)။ လက်ရှိအတိုင်းကတော့ KIA အသာရ ဖို.မဖြစ်နိုင်ဘူး။ မီဒီယာဆိုတာ နှစ်ဖက်စလုံးမှာ ရှိပါတယ်၊ဖွလဲ ခဏပဲရမယ် ။အမှန်တရာဆိုတာ အကြာဆုံ(၃)ရက်လောက်ဆိုပေါ်လာလိမ့်မယ်။
Reply swe htwe January 21, 2013 - 5:29 pm we think KIO should accept President’s offer. Peace talk is the only solution now. If they refuse to take dialogue,people will punish them.